Xiaomi Mi MIX 2S, China ọhụrụ flagship e eze n'ihu | Akụkọ akụrụngwa
Xiaomi Mi MIX 2S, China gosipụtara ọhụụ ọhụrụ ya
E gosipụtara mma agha mbụ nke Xiaomi ugbu a. Versiondị nke atọ nke ezinụlọ Mi MIX dị ebe a. Dị ka anyị maraworị tupu oge eruo, ọ bụ maka Xiaomi Mi MIX 2S. Ekwentị mkpanaka a, nke gbanahụrụ Ọkwa ama ama na ọtụtụ ụlọ ọrụ chọrọ itinye aka na imepụta ụdị ọhụụ ha, gụnyere mmelite ma nye ọnụahịa asọmpi pụtara.
Xiaomi abụrụlarị ika nke dị ugbu a, ma ọ dịkarịa ala na Spain, n'ụzọ anụ ahụ. Buru Storeslọ ahịa 4 arụnyere na mpaghara Spanish odikwa ka ebumnuche ndia ga eme ka onu ogugu ahu bawanye. Nke ahụ kwuru, Xiaomi Mi MIX 2S bụ otu n'ime ìgwè ndị kachasị atụ anya na ọnwa ndị na-adịbeghị anya. O mechara bụrụ ọkwa. Anyị na-akọwa njirimara ọrụaka ya.
1 Ihuenyo nnukwu usoro na imewe na-aga n’ihu
2 Ike na nhọrọ RAM na nchekwa dị iche iche na nke a Xiaomi Mi MIX 2S
3 Igwefoto foto na nkwalite iji kpochapụ ubu na asọmpi ahụ
4 Battery ka dakọtara na wireless Nchaji
5 Sistemụ nrụọrụ na njikọ
6 Nnweta na ọnụahịa nke Xiaomi Mi MIX 2S
Ihuenyo nnukwu usoro na imewe na-aga n’ihu
Iji malite, anyị ga-agwa gị na imewe ahụ emebibeghị ma e jiri ya tụnyere ụdị ndị gara aga. Nke ahụ bụ, nnukwu usoro na a 5,99-anụ ọhịa diagonal ihuenyo na Full HD + mkpebi. Ke adianade do, na dị ka anyị kwuru ná mmalite, ọ na-eji ụdị "Notch" eme ka iPhone X na ekwentị dị mkpa mere ejiji ma na-eziga igwefoto n'ihu obere etiti na ala nke chassis. N'ikwu okwu banyere chassis ahụ, ọ nwere iko na seramiiki mechara, yabụ mmetụta dị n'aka bụ ịnọ n'ihu otu egwuregwu kachasị elu. Ọ bụ ezie na anyị ga-ahụ, ihe kpatara ya bụ eziokwu
Ike na nhọrọ RAM na nchekwa dị iche iche na nke a Xiaomi Mi MIX 2S
Ka ọ dị ugbu a, kpakpando Qualcomm enweghị ike ịla efu. Ma ọ bụrụ na Xiaomi chọrọ ịnwale ịchacha ihe site na achicha ahụ, o kwesịrị ime ya n'ụzọ a. Ya mere, anyị na-eche ihu ihe nlereanya na ga-akwadebe ihe nhazi Snapdragon 845. Na nke a, agbakwunyere na a ga - enwe ọtụtụ nsụgharị - dịka ọ bụ maka omenala maka ika ahụ. Na na ma RAM na nchekwa ga-aga aka na aka. Nke ahụ bụ, a ga-enwe nsụgharị 3 ịhọrọ site na:
6 GB nke Ram + 64 GB nke ohere
6 GB nke Ram + 128 GB nke ohere
8 GB nke Ram + 256 GB nke ohere
Ka i si hụ, ọ ga - abụ ọnụ dị ike nke na - enweghị ihe ga - enwe anyaụfụ ndị ọzọ na - agba aka na mpaghara ahụ. Ugbu a, dị ka ihe na-adịghị mma - ọ bụrụ n'ikpeazụ ị chọrọ ohere karịa - na nke ọ bụla n'okwu ikpe anyị ga-enwe oghere iji kaadị nchekwa. Mana dịka ị maara nke ọma, enwere ụzọ ndị ọzọ: ọrụ ndị sitere na igwe ojii ma ọ bụ ohere mpụga n'ụdị eriri USB.
Igwefoto foto na nkwalite iji kpochapụ ubu na asọmpi ahụ
Ọ bụ eziokwu na enwere ihe nke Xiaomi adabaghị. Otú ọ dị, ọ ghaghị ịkụ nzọ n'otu n'ime atụmatụ kpakpando nke oge ndị a: igwefoto abụọ na azụ. Ma nke a Xiaomi Mi MIX 2S na-ebu ya. Karịsịa anyị na-ekwu maka nkesa dị ka nke iPhone X. Ọ mejupụtara ya ihe mmetụta 12 megapixel abụọ (otu sitere na Sony na otu Samsung). Nsonaazụ bụ inwe ike igwu egwu na ihe oyiyi; nweta mmetụta "bokeh" hụrụ n'anya ma nwee ike itinye mmetụta na njide anyị niile.
Ka ọ dị ugbu a, n'ihu, igwefoto nke ndị otu Eshia nwere ihe mmetụta 5 megapixel mkpebi ọ ga-elekwasị anya maka selfies, oku vidiyo ma nwee ike ịmata onwe anyị n'oge ahụ iji kpọghee ọnụ ma nwee ike ịmalite iji ya.
Battery ka dakọtara na wireless Nchaji
Anyị kwenyere na Xiaomi adịghị emechu ihu. Ihe nlele bu nke a Xiaomi Mi MIX 2S. Chineselọ ọrụ China maara ihe ndị ga-esonye n'ime otu ya iji dọta uche. Ihe ọzọ nke na-abụ kpakpando n’ime afọ a 2018 bụ ike ịgba ụgwọ ekwentị na-enweghị mkpa maka eriri. N'ebe ọwụwa anyanwụ Mi MIX 2S na-akwado ikuku ikuku. Ma, ee, ọ bụrụ na ị na-eche: Xiaomi ga-eresịkwa nke ya wireless chargingkwụ ụgwọ ute.
Ọzọkwa, batrị ya ruru 3.400 milliamps ikike inye gị ikike ime obodo na kwa ụbọchị. Ma ọ bụrụ na ihe a nile ezughi, kwadebe ngwa ngwa ụgwọ QuickCharge 3.0. Ya mere na nkeji ole na ole, anyị ga-enweta mmụba pụtara ìhè na ume nwere ike iguzogide nkwụsị ikpeazụ nke ụbọchị ahụ. Kpachara anya, na ọ bụrụ na ị na-emekarị ọrụ.
Sistemụ nrụọrụ na njikọ
Ọ dịkwa mkpa na ụdị nke a Xiaomi Mi MIX ezinụlọ iji zọọ na ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ Google: Android 8.0 Oreo. Ọ na-emekwa nke a site n'ụdị ọhụụ MIUI 9. Meanwhiledị oyi akwa omenala ka ọ dị ugbu a. ị nweta NFC teknụzụ; na-akwado netwọkụ nke 4G ọgbọ ọzọ; na o nwere ihe mkpisi aka ihe mmetụta na azụ na ya odori mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri bụ USB-C ụdị.
Nnweta na ọnụahịa nke Xiaomi Mi MIX 2S
N'ikpeazụ, gwa gị na Xiaomi Mi MIX 2S ga-adị, nke mbụ, na obodo ya. Ihe bụ ihe ọzọ, amarala na ọ ga-erute ahịa ndị ọzọ —O doro anya na itinye akara aka na ụlọ ahịa anụ ahụ, Spain ga-abụ otu ebe aga. Na ọnụahịa ndị agbafuola - kpachara anya, anyị na-ekwu maka mgbanwe - ndị a:
6 GB nke Ram + 64 GB nke ohere: 430 euro
6 GB nke Ram + 128 GB nke ohere: 460 euro
8 GB nke Ram + 256 GB nke ohere: 515 euro
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Xiaomi Mi MIX 2S, China gosipụtara ọhụụ ọhụrụ ya
Acer na-ewebata mbadamba mbụ na Chrome OS